Ahụigodo ya na bọtịnụ ikanam - Ọhụrụ Apple Patent | TeraNews.net
Ahụigodo ya na bọtịnụ LED - Ọhụrụ Apple Patent
na-ede akwụkwọ Nikitin Eugenius E bipụtara 03.01.2021
Ọ bụ ihe ijuanya na ndị China echeghị echiche banyere nke a, ndị na-ere ngwa PC dị ọnụ ala nye ụwa niile. A sị ka e kwuwe, ọtụtụ nde ndị ahịa zụtara kiiboodu China na hieroglyphs na ụlọ ahịa n'ịntanetị. Ma mgbe ahụ - ha jiri asụsụ ntinye achọrọ iji kpụzie akwụkwọ mmado. Ahụigodo nwere bọtịnụ LED bụ Apple patent ọhụrụ. Ọ dị mfe ịme ọtụtụ narị oghere ndị a na-ahazi LED. Ma tinye ha na bọtịnụ keyboard. Ma, ọ bụrụ na ihe ndị ọzọ maka PC bụ ihe a na-enyo enyo, mgbe ahụ maka laptọọpụ ụdị azịza a enweghị atụ dịka ịbụ ihe a na-achọ.
Ikike nchọpụta ahụ n'onwe ya gụnyere ihe karịrị ọkụ ọkụ ọkụ. Na-akwado ọtụtụ mmetụ, mmeghachi omume nrụgide na nzaghachi tactile. Nke ahụ dị mma. Cheedị laptọọpụ nwere teknụzụ ndị a niile ma ọ bụ igodo egwuregwu. Ugbua ugbu a achọrọ m ịzụta ụdị gadget ahụ, hazie ya ma rite uru niile nke 21st narị afọ.
Dị ka ndị chepụtara Apple Corporation tụụrụ ya, igodo ọ bụla ga-abụ obere ihuenyo LCD. Dịka ọmụmaatụ, ọ nwere ike ịbụ OLED. Ma ọ bụ teknụzụ yiri ya. Bọtịnụ ga-abụ uzo. Nke a pụtara na ihe ndabere nke igodo bụ iko, seramiiki ma ọ bụ safaya.
Needsnye chọrọ kiiboodu na bọtịnụ ikanam
O doro anya na na ngalaba mmefu ego ọ dị mfe ịwụnye akwụkwọ mmado na igodo. Ma n'etiti na adịchaghị nke, ihe ngwọta ga-ahụ ngwa maka onwe ya.
Ndị isi na-anaghị ahụcha ụzọ nwere ike ime ka akwụkwọ ozi buru ibu. Ma ọ bụ gbanwee agba ọkụ azụ. Site n'ụzọ, a na-eji ntọala ikpeazụ eme ihe n'ụzọ zuru ụwa ọnụ - dịka ọmụmaatụ, keyboard keylit.
Ọ dịghị mkpa ịme laptọọpụ maka mpaghara ụfọdụ. Latin, Cyrillic, hieroglyphs - onye nwe ya n’onwe ya na-edozi keyboard nke ọ chọrọ.
Na egwuregwu, ị nwere ike ịhọrọ igodo maka njikwa. Ruo n'ókè ị rụnyere ihe osise na-egosi arụmọrụ nke bọtịnụ ahụ.
Enwere ike ime otu ihe ahụ maka ndị na-emepụta ihe, ndị mmemme na ndị na-arụ ọrụ na foto na ọdịnaya vidiyo.
Ahụ igodo na ikanam bọtịnụ bụ nzọụkwụ n'ọdịnihu. Ọ bụrụ na ịmee ihe niile nke ọma, ị nwere ike nweta nsonaazụ dị jụụ. Idtụle ahụmahụ Apple na mmepụta nke teknụzụ kọmputa, ọ gaghị enwe mmejọ ọ bụla. Soonwa ga-ahụ ngwa ngwa ọhụụ ọhụụ na ahịa ma kesaa ha.
Enwere naanị otu nzaghachi nke patent a. Ndị China nwere ike ịnwe iwu ma ọ bụrụ na ha enye azịza dị ọnụ ala na bọtịnụ LED na ahịa ha. Nke ahụ bụ, naanị akara Apple ga-enwe keyboard dị otú ahụ, ọnụahịa ya ga-abụkwa nke kwesịrị. Ga-enwe afọ ojuju naanị na egwuregwu mkpebi akwa ụdị Taiwan.
Foto Google na -agbasawanye ọrụ nke ọrụ ya
Onye na -ebi akwụkwọ 3D - gịnị ka ọ bụ, gịnị kpatara o ji dị mkpa
Ọ ka mma ịsa ala - họrọ akụrụngwa na ngwa
Viber, Telegram na WhatsApp na -achịkwa akwụkwọ ozi
Igwe nche anwụ nke Xiaomi Zuodu - onyinye dị mma maka $ 20
Ego ole ka ịchọrọ ịkwalite na LGA 1700
Ekwentị IIIF150 R2022 - ụgbọ ala maka oge niile
Ugoos AM7 Smart TV - ahịa bidoro
Otu esi ahuta ihu onyonyo onyonyo
Egwuregwu kọfị CHUCHEL (Scarecrows)
Aha ndị nwoke na-ekwesịghị ntụkwasị obi n’ụwa